Aza miantehitra amin'ny hafa intsony. - Anony - Quote Pedia
Miaina irery isika eo amin'ny fiainana. Rehefa mitohy ny fiainana, manao fifandraisana maro izahay. Ny ankamaroan'izy ireo dia tena sarobidy amintsika ary noho izany dia manjaka ny fiaraha-miaina. Saingy tsy tokony hisy dikany amin'ny fiainana, izay ianteheran'ny olona iray, ka tsy afaka miankina amin'ny tenantsika isika.
Fantaro hatrany fa isika no mpanohana lehibe indrindra antsika. Na iza na iza mandao antsika, dia tsy hahatsiaro ho tsy afa-manoatra isika, raha toa ka mahatonga antsika ho afaka miatrika na inona na inona aleha. Mba hahatratrarana an'izany dia mila manorina hery ara-tsaina isika.
Tokony ho salama ara-tsaina isika hiatrehana ny olana rehetra sy izay olana rehetra aleha. Tokony hiatrika ny ara-batana koa isika. Araka izany, dia mila manaram-po amin'ny fikarakarana ny tena. Tsy mitovy ny hoe lasa fitiavan-tena, fa ny fitandremana tena dia ilaina amin'ny fitomboan'ny olona.
Rehefa miantehitra amin'ny olona iray ianao, dia mitaky hihevitra fa hikarakara ny olanao io olona io. Saingy noho ny antony rehetra, ny olona hafa akaiky, dia mety tsy hahatana ny fampanantenany. Raha tsy miomana amin'ny toe-javatra toy izany isika, dia hahita fa tena sarotra tokoa ny fihetsiky ny hafa, avelao izy hihetsika.
Noho izany dia lazaina hatrany fa tsy miankina amin'ny hafa. Raha tsapantsika fa tsy manana fahaizana manokana isika izay miaro antsika tsy hanao zavatra, raha tokony handray ny tsy fahampian'ny fahaizan'ny faharesena isika dia tokony hiezaka hampivoatra izany fahaiza-manao izany. Io dia hanampy antsika hanatsara ny tenantsika ho olona ary mampita antsika hahatoky tena bebe kokoa.
Quotes On Depence
Teny tsikaritra fohy
Teny fohy fampaherezana fohy
Teny fohy fanentanana ho asa
Teny fohy fanavaozana
Teny kely omena
Teny fohy momba ny fahendrena
Mbola tsy nahita endrika nitsiky kely izay tsy tsara tarehy aho. - Anonyme
Mbola tsy nahita endrika nitsiky kely izay tsy tsara tarehy aho. - Teny nindramina tsy fantatra anarana:
Aza manenina intsony fa olona tsara amin'ny olona diso. Ny hatsaram-panahinao dia milaza ny zava-drehetra momba anao. Ny fihetsik'izy ireo dia milaza ny zava-drehetra momba azy ireo. - Anonyme
Aza manenina intsony fa olona tsara amin'ny olona diso. Ny hatsaram-panahinao dia milaza ny zava-drehetra momba anao. Ny fihetsik'izy ireo…
Zaro ny sainao hahita ny tsara amin'ny toe-javatra rehetra. - Anonyme
Ny olona optimistika dia manana fiainana mahomby kokoa noho ny olona tsy misaina. Ny fatiantoka dia…